Goosashadii maleeshiyada Liyuuga oo Faraha kabaxday. | ogaden24
Goosashadii maleeshiyada Liyuuga oo Faraha kabaxday.
Maleeshiyada Liyuu Police-ka ee maamulka Woyanuhu kasamaystay Ogadenia Hoos-taga ayaa Todobaadkii lasoo dhaafay wajahay xaalad Jahawareer oo keentay in si Habqan ah ay kula baxsadaan.
Warka waxaa uu sheegaya in 13-kii bishan ay Tuulada Shiniile ee degmada Dhanaan kagoosteen 3-maleeshiyada Hawaarinta ah, 14-kii isla bishan oo ah maalin kadib isla degmada Dhanaan duleedkeeda waxaa ka fakaday 8 Askari oo qayb ka ahaa maleeshiyadii kahawlgalaysay degmada Dhanaan iyo nawaaxigeeda, lamana Oga halka ay maleeshiyaadaasi u baxsadeen.
Isla 14-kii bishan magaalada Birqod waxaa kagoostay Koox maleeshiya ah oo tiradooda lagu kala sheegay 7-ilaa 11-Askari katirsanaa maleeshiyada Aaga Birqodeed.
15-kii bishan magaalada Caado ee Gobolka Doollo waxaa ka dhuuntay 8-kamida maleeshiyadii kusugnayd magaalada, waxaana warku sheegayaa in maleeshiyadaasi u baxsadeen dhinaca xadka Soomaaliya oo aan wax badan ka fogayn.
16-kii isla bishan oo ah maalin kahor magaalada Dig waxaa kabaxsaday 3-kamida maleeshiyadii Aagaasi kusugnayd, balse mid kamida maleeshiyadii baxsatay ayaa waxaa Gacanta kudhigay koox isla maleeshiyada ah oo kadaba tagtay kaasi oo sida lasheegay u socon waayay, isla 16-kii bishan degmada Xamaro ayaa waxaa iyaguna ka Goostay 2-kamida maleeshiyadii Liyuuga ee kusugnayd.
Maleeshiyada Liyuuga ayaa wajahaysa xaalad Qalafsan oo nololeed sida isu awood sheegasho,mushaar la’aan, iyo khilaaf joogta ah, waxayna arimahani soo dada jiyeen in qaar badan oo kamida maleeshiyadu go’aan sadaan inay Lafahooda la baxsadaan isagana Tahriibaan dalka intii ay cidla kudhiman lahaayeen.